Abakamatikuletsheni bakhathazekile ngekusasa labo | News24
Abakamatikuletsheni bakhathazekile ngekusasa labo
NAKUBA uMnyango wezeMfundo esifundzaweni saKwaZulu-Natal unalo uhlelo lokulekelela abafundi bakamatikuletsheni ezifundo zabo njengoba kuqhubeka ukuvalwa kwezwe thanqa okwesikhashana, abafundi bathi loku akwenele njengoba sisincane kakhulu isikhathi abafundiswa ngaso emsakazweni kanti futhi abalitholi ngisho ithuba lokubuza imibuzo uma ngabe kukhona lapho bengezwanga khona.
Lolu hlelo lo mnyango kubalwa kulona ukuba khona izikhathi ezibekiwe eziteshini zemisakazo eyahlukene nalapho kufundwa khona izifundo ezahlukene njalo ngosuku.
Ngesikhathi lolu hlelo luqala abafundi bebefundiswa isikhathi esingangehora kodwa manje sekuyimizuzu engama-30 (30minutes) nje kuphela nokuyikhona okukhalisa abafundi kakhulu.
Laba bafundi bathi bakhazekile ukuthi mhlazane isimo sibuyela kwesejwalekile bazobe besalele emuva nomsebenzi wabo kanti loko kungahle kube nomthelele ekunyukeni kwezinga labafundi abangahle bangaphumeleli ekupheleni konyaka.
Bekhuluma ne-Echo bathe bayalujabulela kakhulu uhlelo uMnyango wezeMfundo onalo lokuthi bafunde izifundo emisakazweni eyahlukene kodwa bathe kubona akwanele ngoba kwesinye isikhathi bayaye bangezwa kahle bese bengalitholi ithuba lokubuza imibuzo.
UThalente wase-Ashdown ofunda eHaythorne Secondary School uthe yena kanye nazakwabo sebeyaye basizwe ukuthi othisha sebevule izinkundla zokufundisa kuWhatsApp kuzo zonke izifundo nokuyilapho bekwazi khona ukuthi bathole ithuba lokubuza khona imibuzo uma ngabe kukhona abangakuzwanga emsakazweni.
“Uyafunda into uyizwe emsakazweni kodwa uthi uma ngabe sekukhona okunye ongakuqondi ube ungabe usazi ukuthi uzobuza kubani.
Enye into ukuthi ezinye izifundo zidlala kwezinye iziteshi uthole ukuthi lesositeshi asidonsi ngasendaweni yangakini lapho okusho ukuthi wena usele kuleso sifundo ebesifundwa ngoba awukwazanga ukulalela.
“Enye inkinga esibhekana naye uyaye uthole ukuthi njengoba singabafundi abenza izifundo ezahlukene uyaye uthole ukuthi kugcina sekuphela isonto wena esakho isifundo singafundwanga, okusho ukuthi wena ususele kakhulu emuva kunabanye. Noma uthi uyazama ukuzifundela wedwa kuba nzima ngoba ugcina usudinga uthisha ukuthi akuchazele ezinye izinto eziningi osuke ungaziqondi ngaleso sikhathi.
Mina ngikhathazekile kakhulu njengamanje ngibona engathi ikusasa lami lizoshabalala lapho ngisathi ngizoliqala ngiyalilungisa,” kubeka yena.
ULwazi Nqayi waseSnathing ofunda e-Edendale Technical High School uthe othisha basesikoleni sabo nabo bavule ama-WhatsApp ngenhloso yokulekelela abafundi ngezifundo zabo, kodwa wathi lokhu kubuye kube nzima njengoba abafundi babuye bangabi nayo imali yokuthenga i-data nabakhala ngokuthi iyabiza.
“Othisha bayazama ukusisiza njengoba sihleli emakhaya kodwa kwesinye isikhathi uyaye uthole ukuthi bazothumela ama-video kanye nolwazi ku-Whatsapp kanti w ena awunalo i-data ngalesosikhathi.
Kuyothi uma ngabe usukwazi ukungena sekunzima ukuthi uqale phansi ubuze ngoba kusuke sekufundwa ngenye into wena ususele.
“Okunye okusiphatha kabi ukuthi kunezifundo ezingakaze zifundiswe nhlobo emisakazweni ezifana ne-techical maths kanye ne technical science, manje asazi noma ingoba zona hlampe zinganakiwe yini.
Thina esenza lezo zifundo sifunda ezinkundleni zokuxhumana kuphela.”
Omunye umfundi waseBongudunga High School uSabelo Khanyile uthe nakube ukufunda ngo-WhatsApp kusiza uthe kunzima kwabanye abafundi abangenawo nhlobo omakhalekhukhwini besimanje ngoba kusho ukuthi akukho lutho abazolufunda.
Uthe abanye abafundi bahlushwa ukungabi nayo imali eyanele yokuhlale bethenga i-data kwazise nalo liyabiza.
Okhulumela uMnyango wezeMfundo esifundazweni saKwaZulu-Natal uMnu Muzi Mahlambi uthe : “Ama-technical subject awahlezi elula ukuthi uwafundise ngaphandle kwabafundi bezibonela bona into eyenzekayo.
Lezi zifundo zizofakwa nazo maduze ohlelweni lwamaphepha umnyango wezemfundo osebenza kulona njengamanje.
“Izifundo zikhethwa ngendlela ezenza ngayo kumatikuletsheni ngonyaka owedlule. Izikhathi emisakazweni nazo azanele uma uziqhathanisa [nesibalo] sezifundo ezikhona. Isikhathi esibekelwe isifundo ngosuku emsakazweni enye into futhi leyo,” kubeka yena.
Uqhube wathi abafundi abangakwazanga ukulalela emsakazweni bangakwazi ukuthola obekufundwa kuma-podcasts kuma-websites emisakazo efana ne East Coast Radio, Gagasi FM, Vuma FM kanye nezinye.
Uthe abafundi futhi bangakwazi ukuthola obekufundwa kwi-KZN Funda portal.
“Uyafunda into uyizwe emsakazweni kodwa uthi uma ngabe sekukhona okunye ongakuqondi ube ungabe usazi ukuthi uzobuza kubani. Enye into ukuthi ezinye izifundo zidlala kwezinye iziteshi uthole ukuthi lesositeshi asidonsi ngasendaweni yangakini lapho okusho ukuthi wena usele kuleso sifundo ebesifundwa ngoba awukwazanga ukulalela”